Gimmick Vamwe Lovin ': Iyo Doomsday Cage Mechi - Wwe
Gimmick Vamwe Lovin ': Iyo Doomsday Cage Mechi
Mune yega yega edition yaGimmick Vamwe Lovin ', isu tinotarisa kune imwe iteration ye gimmick mutambo unowanikwa paWWE Network. Vamwe vane chiratidzo chekubudirira kwavo, vamwe pamwero wavakapunzika, uye vamwe vakango ... zvakaitika.
Isu takatsanangura 'gimmick mechi' se, munzira ipi neipi, kuwedzera mutemo / kuisirwa kana kubvisa mutemo kubva mumutambo, kushandura mamiriro epanyama emutambo, kushandura mamiriro anotsanangura 'kukunda', kana munzira ipi neipi inofamba. yapfuura izvo zvakapusa zvinodiwa nevarume / vakadzi / zvikwata zvinokwikwidza zvinofanirwa kupera kuburikidza nekamwe kamwe kupinza, kuzviisa pasi, kuverenga, kana kukodzera.
Isu tapedza zvinyorwa zvekupedzisira tichitarisa pamitambo ine zvimiro zvisinganzwisisike, mitemo yevatorwa, uye Ric Flair vachitora kushungurudzwa, asi ivo vakazoita zviitiko zvinonakidza; sekutanga kwedu kupinda muWorld Championship Wrestling nharaunda, ngatichererei kune dud rinobatanidza zvese izvo zvinhu: Iyo Doomsday Cage Mechi kubva WCW Isina kuongororwa 1996 , iine Hulk Hogan naRandy Savage maringe nechitsitsinho chega chega paWCW roster, iri Dungeon of Doom neVane Vatasvi vemabhiza, aka The Alliance to End Hulkamania.
Ini handizive kuti ndeipi chikamu chemaminetsi gumi nematanhatu Brutus Beefcake mechi inowira mukati, uye, kutaura chokwadi, handidi kuziva.
WCW Isina kuongororwa
Nyanzvi yekurwa pakati pemakore ekuma1990 yaive yakatarisana nedambudziko rekuzivikanwa: iyo World Wrestling Federation uye mukwikwidzi wayo wepedyo, WCW, vaitengesa vangangoita kune avo vehukama hwevanhu mumhuri nevana vadiki. Chigadzirwa chemakambani ese ari maviri chakaratidzirwa nemavara akajeka, mavara akapamhama, uye zvitsitsinho uye zviso zvevacheche zvinotsanangurwa sekuomesa sezvazvinogona.
Maitiro aya akasangana nekusekwa kwakawanda mutsika dzakakurumbira; pakati pevatambi vanoita kunge vari kungonanga kubva kune rimwe basa kuenda kuringi (sa IRS, Duke 'The Dumpster' Droese, kana Bob 'Spark Plugg' Holly, pakati pevamwe vazhinji) nevarume vane ruvengo rwunoita kunge rwakavatungamira kuti vatyisidzirane neunyoro mutauro, mutsimba waiita kunge usinganyanye.
Nekudaro, imwe kambani yekumusoro kuEast Coast yakatsvaga kushandura zvese izvo, ndokupa shoo yaidada nekukwikwidza kwekupokana kwewrestling. Extreme Championship Wrestling yakapa vateereri vayo mhirizhonga, kudeuka kweropa, uye zvemukati pabonde kupfuura zvingafungidzirwe nemakambani makuru maviri, uye vaverengi vemagazini vakaita Pro Wrestling Illustrated vakatanga kucherechedza mutsauko wakakura pakati peECW nezviratidziro kuwana kutariswa kwenyika.
Kuzivikanwa kweECW pakati pevateveri vevanhu vakuru, pamwe nevana WCW neWWF vakaedza kusvika kune avo vaive vachembera kusvika pazera ravo, kuisa kumanikidza kune Vakuru Vaviri kuti vatore zvinokanganisa zvakanyanya muzviratidzo zvavo. IWWF yakatanga kurerutsa pamiganhu yemitauro ichiri kuunza yakawandisa (uye yakanyanya kusimba) isina-inobata mabharanzi, tisingatauri envelopu-inosundira vatambi vakaita saGoldust neMunhu.
WCW, kune rimwe divi, yakagadzira yakazara yegore ratidziro yakapihwa kunofungidzirwa kurerutsa zvirango zvavo zvine mutsindo pamitambo yavakagadzira, Uncensored . Inoratidzira zvakapinda zvenguva yemberi mune akateedzana senge 'King of the Road' mutambo pakati paDustin Rhodes neBlacktop Bully (iyo, inopesana nemusoro wechiratidziro, yakanyatsogadziriswa kugadzirisa kuvapo kweropa, iro vakwikwidzi vaviri vakadzingwa) uye a tambo tambo pakati paHogan naVader, iyo showa yaive yekumisikidza kukundikana.
Yakaratidzawo mutambo unopera mukuregererwa, pachiratidziro ichivimbisa kusununguka pamitemo nemirau.
Mitambo miviri pachiratidziro yakatadza kubvarura nyeredzi yakanaka kubva kuna Dave Meltzer, uye mutambo wepamusoro-soro waive Hogan-Vader tambo yemutambo mukuru chiitiko apo Hogan akakwanisa kuhwina nekurova, wakazvifungidzira, Ric Flair, kuwana nyeredzi 3.5.
Muna 1996, kambani yakafunga kukwidza mitezo nemitambo yakawanda, zvirevo zvishoma, uye chimiro chakakura uye chakakomberedzwa icho chaizotamba mutambo wehurema hwakanyanya husina kubhadharwa neThe Authority (uye kufungidzira kuti ndiyani anoita basa racho).
maitiro ekuti nguva iende nekukurumidza kubasa
braun strowman uye alexa mufaro
Paul london na brian kendrick
unoziva sei kana mukadzi achikuda
kuziva sei kana zuva rakafamba zvakanaka
Ko mrbeast anowana kupi mari yake yese
sei kungoerekana waitika uye kunakidzwa